Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yezinto Ezintsha Ezintsha UTaiyi
Imodeli TY / LW600B-1 TY / LW450N-1 TY / LW450N-2 TY / LW335N-1 TY / LW335NB-1
Ububanzi beDrum 600m 450mm 350mm
Ubude beDrum 1500mm 1000mm 1250mm
Ijubane Lesigubhu 2200r / iminithi 3200r / iminithi 0 ~ 3200r / iminithi
Icubungula Amandla 90m / h 50m / h 40m / h
Isici Sokuhlukanisa 815 2035 0 ~ 2035
Indawo Yokuhlukanisa 5 ~ 7μm 2 ~ 5μm 2 ~ 7μm
Ijubane Lokungafani 40r / iminithi 30r / iminithi 0 ~ 30r / iminithi
Ukwahlukaniswa Kwejubane Lokulinganisa 35: 1 57: 1
Main Amandla Amandla 55kw 30kw 37kw 30kw 37kw
Asizayo Motor Amandla 15kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw
Isisindo 4800kg 2700kg 3200kg 2900kg 3200kg
Usayizi Ngo-1900 * 1900 * 1750mm 2600 * 1860 * 1750mm 2600 * 1860 * 1750mm 2600 * 1620 * 1750mm 2600 * 1620 * 750mm
Isihlukanisi se-centrifugal sinemisebenzi emibili: ukuhlunga i-centrifugal kanye ne-sedimentation ye-centrifugal. Ukucwenga kweCentrifugal ingcindezi ye-centrifugal eyenziwe ukumiswa emkhakheni wamandla we-centrifugal, osebenza endaweni yokuhlunga, ukuze uketshezi ludlule endaweni yokuhlunga futhi lube yi-filtrate, kuyilapho izinhlayiya eziqinile zibhajwe ebusweni bendawo yokuhlunga ukuzuza ukwahlukana okuqinile oketshezi; ukusetshenziswa kwe-centrifugal sedimentation Isimiso sokuthi izingxenye zokumiswa (noma i-emulsion) ezinokuqina okuhlukahlukene zihlala ngokushesha emkhakheni wamandla we-centrifugal ukuzuza ukwahlukana okuqinile (noma oketshezi-ketshezi).
Kunamamodeli amaningi nezinhlobo zama-centrifuge, futhi intengo ibiza kakhulu. Lapho ukhetha futhi uthenga, kufanele kulinganiswe ngokomsebenzi. Ngokuvamile, lezi zinto ezilandelayo kufanele zibhekwe:
(1) Inhloso yokwehlukanisa phakathi, noma ngabe ukuhlaziya noma ukulungisa i-centrifugation
(2) Uhlobo nobungako besampula, kungaba yiseli, igciwane, noma iprotheni, nosayizi wenani lesampula. Ngokuya ngalezi zinto, nquma ukuthi uyayithenga yini i-centrifuge ehlaziyayo noma i-centrifuge yokulungiselela; noma ngabe ijubane eliphansi, ijubane elikhulu noma ijubane elikhulu; noma ngabe ngumthamo omkhulu, ivolumu engaguquki noma i-micro-centrifuge.
(3) Ikhono lezomnotho: Lapho imodeli inqunywa, umkhiqizi nentengo kufanele kubhekwe. Intengo nokusebenza komkhiqizo kuvumelanisiwe.
(4) Eminye imininingwane: njengokuthi ukusebenza kwe-centrifugal kulula, noma ngabe ukugcinwa kulula, noma ngabe idizayini iphelelwe yisikhathi, noma ngabe ukunikezwa kwezingxenye ezigqokile kulula yini, njll.
Langaphambilini China alamu eziphuthumayo Isexwayiso Siren nge Strobe Light - Taiyi
Olandelayo: Umshini we-Impeller Diesel Dredger Sub Mercible Dredging Sand Pump Machine
I-Sieving Calcium Carbonate yePetroleum Proppan ...
Impeller Udizili Dredger Sub Mercible Dredging S ...
75KW OEM Engagqwali Design Electric Commer ...